Shimbiraha Anti Anti, balli Net, Mesh Shabakadda mesh - Saddex Ido
Ilaali jardiinadaada - Ha sugin cayayaanka, deerada iyo shimbiraha inay dhacaan beertaada. Ilaali ubaxyadaada, mirahaaga, miraha iyo khudaarta cagaaran iskana illoobi kuwa soo xadgudbaya weligood. Si fudud loo rakibo, wax ku ool ah oo aamin ah, shabaq aad u waara oo soconaya sannado. Qaab dhismeedka taageerida shimbiraha wuxuu awood u siinayaa iftiinka iyo qoyaanka inay gaaraan miro iyo dalagyo. 100% Nooc cusub oo tayo sare leh. Waxyaabaha: PE mesh Size: 10mm x 10mm, 12mm x 12mm, 15mm x 15mm, 20mm x 20mm, 25mm x 25mm, 40mm x 40mm Color: Green, Black ...
Shandadaha kahortagga ah ee loo yaqaan 'anti-net' ayaa laga sameeyaa HDPE monofilament waxayna bixiyaan badbaado muddo dheer ah dhammaan noocyada dalagyada iyo dhirta ee ka dhan ah shimbiraha iyo ugaarsadayaasha oo dhan. Ballac ballaadhan ayaa loo heli karaa ilaa 20m meelaha waaweyn. Cimriga shabaqa waa 4-6 sano, waxay kuxirantahay xaalada isticmaalka. Alaabtaan waxaa loo adeegsan karaa baqashada miraha, si loogu daboolo saqafyada sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu daboolo balliyada si looga ilaaliyo kalluunka weerarada xagjirka ah iyadoo sidoo kale la ilaalinayo caleemaha. Waxyaabaha: PE mesh Size: ...
Shabakadda ilaalinta dalagyada jardiinada waxaa loogu talagalay inay ka ilaaliso jardiinadaada iyo qurxinta dhirta shimbiraha, xayawaanka iyo kuwa kale ee ku soo xadgudbay. Waxaa lagu heli karaa dhowr cabbir. Midhaha Miisaanka Ilaalinta Mesh Waxyaabaha Tirada Xajmiga Mesh TGS-SL-110 1x8m 10X10mm TGS-SL-210 2x4m 10X10mm TGS-SL-21619 2x16m 19x19mm TGS-SL-23219 2x32m 19x19mm TGS-SL-210019 2 × 100 19x19mm TGS-SL- 215019 2 × 150 19x19mm Beerta shabaqa Nambarka Nambarka Cabbirka Mesh TGS-SL-7100 7′x100 ′ 1/4 ″ 1/2 ...
Digir iyo Bean Netting waa shabaqa maaddada polyetylenka mesh laga soo saaro, taageerida digirta orodka, digirta, digirta macaan iyo dhirta kale ee fuula - digirta orodyahanada oo si gaar ah uga faa'iideysata shabaqda markii lagu xardho jir. Ka samaysan PE, shabaqa ayaa beddeli kara mesh birta, shabakadda birta iyo walxaha hallaabi kara. Waa mid waara, fudud laakiin xoog leh waana dib loo isticmaali karaa min hal xilli ilaa kan xiga, waa fududahay in la rakibo oo u adkeysata reagents-ka dibedda. Net Shabakadani waxay caawineysaa taageerida dhirta cusub ee fuulitaanka ...
Plastic Garden Trellis Mesh waa soosaarid HDPE UV xasilisay dalool laba jibbaaran Trellis ku habboon taageeridda dhirta fuulitaanka, ama ilaalinta beerta. Waa beddel khafiif ah oo loo yaqaan 'trellis alwaax ama silig trellis ah' waana la ilaaliyaa UV sidaas ayeyna ku sii socon doontaa. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa mesh trellis mesh ah qaab aad ku abuuri karto deyr ey ama xayndaab digaag ah. ama noqo xayndaabka dariiqa carruurta. Una dhig si ay socod baradka uga fogeeyaan barkaddaada iyo meelaha kale ee aan wanaagsaneyn ee ardaagaaga. Xayndaabkeena mesh caaga ah ayaa laga heli karaa cabirrada godadka ...
Mesh gutter mesh, caag ilaaliyaha mesh gutter mesh wuxuu daboolaa ilaalada mesh gutter duuba la jillaab for caleemaha roobka, Isticmaal Qalabka & hagaajinta Guriga - Waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in waxyaabaha biyaha, taranka digaagga, tallaabo dabiici ah, dhismaha madaniga, dayactirka wax soo saarka biyaha, beerta golf ilaalinta koorsada. Qalabka Mesh Cover Gutter Guard Mesh Cover: PP / PE Color: Black Size: 16 ft x 6in, 20 ft x 6in, 20ft x 7.1in, 2mm Thickness Durable, Mesh Debecsan Ayaa Si Fudud Looga Furan Karaa & La Dhigi Karaa Muddada Sci ...
Mesh balanbaalis mesh laga sameeyey xoog HDPE iyo UV xasilloon, waxay dareemeysaa wax badan sida maro jilicsan in la taabto oo socon doona sanado badan. Iftiin ku filan si toos ah loogu dul dhigo dalagyada isla markaana xoog u leh in lagu daboolo looxyada, baqashada ama qoob-ka-ciyaarka. Waxay u dhaqantaa sidii caqabad jireed oo udhaxeysa dalagyada & balanbaalista iyaga oo ka hor istaagaya inay beedkooda dhigaan, isla markaana, diirba ay cunayaan dalagyada. Sidoo kale waxay faa'iido u leedahay ilaalinta balliyada ka soo dhacaya burburka iyo Herons. Mesh size 6mmx6mm Xidhmada: Baled ama duub bac bac PE ...
Dharkeenna la isku tolay ayaa loo qaabeeyey oo loo dhisay si loogu oggolaado qulqulka hawadu inuu kaa dhigo mid qabow wuxuuna ku yimaadaa arrimo badan oo dabool ah, sidaa darteed waxaad si fudud u heli kartaa mid ku habboon baahidaada. Dharka Hooska waxaa badanaa loo adeegsadaa codsiyada la xiriira ilaalinta dalagga iyo beeraha. 35% -100% heerka hooska Waxaa lagu heli karaa midabbo kala duwan sida caddaan, madow, bunni, jaalle, casaan iyo cagaar laga sameeyay UV oo xasilloon HDPE Xoog leh, waara oo u adkaysata jeexitaanka iyo qudhunka Waxaa lagu heli karaa ballac 1m- 12m ah, dherer ahaan markii la codsanayo Tape + Ta ...
Shaashadda Xayndaabka Asturnaanta ee ka samaysan walxaha HDPE, afarta dhinac ayaa lagu dhammeeyaa waxyaabo la xoojiyay oo lagu dhammaystiray grommets dhammaan afarta gees, ka dibna la soo baakadeeyey oo la geeyey diyaar u ah rakibidda. Dharka waa la xasiliyay UV si ay uga hor tagto hoos u dhaca una haysto xoog maado sannado badan oo la isticmaalo. Si fudud ayaa loogu dhejin karaa xargaha zip si loo rakibo. Waxaa badanaa loo isticmaalaa ardaaga, jardiinooyinka, aagagga balliyada lagu xajiyo, maxkamadda, dhacdooyinka, balkoonka iyo beerta. Shaashadda xayndaabku waxay u oggolaaneysaa qulqulka hawada iyo biyaha inay maraan, qabsadaan ...
Net-hiil Net waxaa loogu talagalay in lagu daboolo geedo tufaax ah, beero canab ah, beero canab ah iyo aqalka dhirta lagu koriyo. A polyetylenka cufnaanta sare leh, oo aad u xasilloon kana soo horjeedka falaadhaha UV, ayaa loo isticmaalay in looga hortago waxyeellada roobdhagaxyada guddi kala duwan oo dalagyo ah. Sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad ka ilaaliso geedaha iyo miraha shimbiraha adoo weli u oggolaanaya qorraxda badan. Shabakadaha ka hortagga roob-dhagaxyada waa kuwo fudud, dabacsan, oo si fudud loo rakibo oo loo tirtiro. Waxyaabaha: Midabka PE: Caddaan, Culeyska Transparent: 45gsm, 60gsm, 70gsm, 90gsm Xidhmada: Baled / Rolls → Xoog, jeex jeex ...
HDPE Olive Net for Olive Harvest wuxuu ka samaysan yahay miisaanka khafiifka ah ee jilicsan oo waara UV polyetylen xasiliya. Shabagyadu waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo meshes ah si loo wanaajiyo hababka goosashada kala duwan ee saytuunka iyo miraha. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu soo ururiyo in badan oo miro ah sida iniinta, iniinta, saytuunka, hazelnuts iyo xabadka. Cimri dherer aad u fiican si looga fogaado luminta beddelka soo noqnoqda （Afka iyo daloolka, waxaa la dhigi karaa dhulka ama waxaa laga lalmi karaa geedka) Shabagga saytuunka ah waxaa la dhigay arou ...
Shabakad cusub oo cusub www.3sheepgarden.com
Macaamiisha Qaaliga ah, Waxaan dhammeynay boggayaga cusbooneysiinta. Ku soo dhowow inaad noo soo dirto baaritaan. Waxaan joognaa waqti kasta. Thanks & Best Salaan 3sheepgarden alaabta